J 147 vovoka (1146963-51-0) | fitambarana neuroprotective sy neurotrophic
/ Products / Nootropics vovoka / J 147 vovoka
Rating: SKU: 1146963-51-0. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram amin'ny baikon'ny J 147 (1146963-51-0), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
J147 vovoka dia novolavolaina voalohany tao amin'ny 2011, ary ny mpikaroka dia nanao fikarohana maro izay mampiseho fa afaka manova ny fahatsiarovan'ny fahatsiarovan-tena sy ny fihazakazakazaka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny Alzheimer amin'ny totozy. Saingy mandra-pahatonga ity fianarana ity, tsy fantany ny fomba niasany tao anaty sela. Afaka nampiseho izy ireo fa ny poeta J147 dia miasa amin'ny fanodinana ATP, proteinina iray ao amin'ny mitochondria ary ny loharanon'ny angovo entin'ny vatana. Rehefa tonga teo ny jiro J147, dia niaro ny zava-manahirana mifandray amin'ny fahanterana ny neurons. Ny fanandramana fanampiny dia nampiseho fa ny J147 dia mampitombo ny haavon'ny ATP ary mampiroborobo ny mitochondria mahasalama kokoa
J 147 video vovo
Raw J 147 karazan-tsoratra fototra
Name: J 147 vovoka
Formula Molecular: C18H17F3N2O2
Molekular lanja: 350.3349896
Color: Vovoka fotsy na fotsy
Raw J 147 vovoka amin'ny fampivoarana ny fiasan'ny atidoha sy ny tsimok'aretina fanampiny
J 147 (1146963-51-0) fampiasana dosage
Ny fampiasana tetika fikarohana zava-mahadomelina ho an'ny aretin'i Alzheimer (AD) izay miorina amin'ny pathologies maro amin'ny fahanterana, dia namantatra fitambaran-kery mahery vaika misy ny fahombiazan'ny fahatsiarovana ny biby mpikiky sy ny modely biby AD. Koa satria io fitambarana io, ny vovo-J-147, dia hidrazide phenyl, nisy ny fiahiahiana fa azo entina amin'ny amine / hidrazine manitra izay mety ho voan'ny kanseran'ny bakteria. Mba hijerena an'io mety io, dia nodinihinay ny metabolites ny vovoka J 147 amin'ny microsome olombelona sy totozy ary plasma totozy. Aseho fa ny vovoka J-147 (1146963-51-0) dia tsy asiana metabolisma amin'ny amine na hidrazine manitra, fa ny scaffold dia miorina tsara, ary ny metabolites oxidative koa dia neuroprotective. Tapaka fa ny metabolites lehibe an'ny vovo J 147 (1146963-51-0) dia mety handray anjara amin'izany hetsika biolojika amin'ny biby.
J 147, nalaina avy amin'ny curcumin, singa curry curry, manana poizina ambany ary mamadika ny fahasimban'ny neurons mifandraika amin'ny Alzheimer.
J 147 (1146963-51-0) no proteinina mitochondrial fantatra amin'ny anarana hoe ATP synthase, indrindra ATP5A, fiaraha-miombon'io proteinina io. Ny synthesis ATP dia tafiditra ao amin'ny taranaka mitochondria ATP, izay ampiasaina amin'ny angovo.
Ireo mpikaroka dia nampiseho fa noho ny fampihenana ny vitan'ny ATP synthase, dia afaka niaro ny selan-tsiranoka avy amin'ny toetoetra maro mifandraika amin'ny fahanteran'ny atidoha izy ireo. Ny antony iray mahatonga an'io fiantraikany amin'ny neuroprotective io dia heverina ho anjara asan'ny excitotoxicity amin'ny fahasimban'ny sela voajanahary.
Ny excitotoxicity dia ny fizotry ny aretina izay novonoina sy novonoin'ny neurons noho ny fanakanana ny mpandray tsipelina ho an'ny glutamate ny neurotransmitter. Eritrereto hoe somary kely toy ny fiakaran'ny lelafo nipoitra haingana sy haingana ka ny farany dia mahatonga ny jiro hazavana hitsoka.
Vao haingana, ny anjara asan'ny ATP fandikàna ny ATP ho an'ny neuroprototection amin'ny fanodinkodinan'ny excitotoxic dia naseho tamin'ny fandalinana ny mozika . Ny fandinihana faharoa dia nampiseho fa ny modelim-bolo maneho ny endriky ny endrika maha-mutant ny ATPase 1 (hIF1), izay miteraka fihenjanan'ny ATP synthase, dia nanamafy kokoa ny fahafatesan'ny neuronal taorian'ny faharerahan'ny excitotoxic. Io angon-drakitra io dia mifanaraka tsara amin'ny fandinihana ny poeta J 147, izay nitomboan'ny fihenan'ny IF1 tao amin'ny totozy ny asan'ny ATP synthase (ATP5A manokana) ary dia neuroprotective.
Fampitandremana amin'ny Rohibe J 147 vovoka
Ny fampahalalana hita eto dia manaporofo fa ny J-147 dia afaka manavotra ny tsy fahampian-tsakafo rehefa tarihina amin'ny faramparan'ilay aretina. Ny fahaiza-mamorona J-147 mba hanatsara ny fahatsiarovan-tenan'ny tazo AD dia mifamatotra amin'ny fampidirana ny fototarazan'ny neurotrophic NGF (ny fototarena nerveur) sy ny BDNF (ny vokatry ny neurotrophic ao amin'ny atidoha) ary ny protecteurs BDNF maro be izay ilaina amin'ny fianarana ary fahatsiarovana. Ny fampitahana ny vovony J-147 (1146963-51-0) sy ny volypezy ao amin'ny modely scopolamine dia nampiseho fa raha toa ka mitovy amin'ny fahatsiarovan-dry zareo fahatsiarovan-tsavona ny fifandraisana roa, ny J-147 dia tena ambony noho ny fahatsiarovana fahatsiarovana ara-espace ary ny fampiendrehana azy roa tsara indrindra ho an'ny tontolon'ny siansa sy ny fitadidiana.
Ny aretin'i Alzheimer dia fikorontanan'ny ati-doha, izay tsy ela akory izay no laharam-pahamehana voalohany ho an'ny fahafatesana any Etazonia ary mahakasika olona mihoatra ny dimy tapitrisa amerikana. Izy io koa no mahatonga ny trangan-javatra mampidi-doza indrindra amin'ny olon-dehibe efa lehibe, araka ny National Institutes of Health. Raha ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina dia nanoloana ny tahan'ny amyloid ao amin'ny atidoha (izay marika amin'ny aretina), dia vitsy no hita fa mahomby ao amin'ny toeram-pitsaboana.
"Raha ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina dia mamolavola ny tahan'ny amyloid ao amin'ny atidoha (marika mampiavaka ny aretina), dia tsy misy na inona na inona azo tsaboina ao amin'ny toeram-pitsaboana", hoy i Schubert, tompon'andraikitry ny fianarana.
Taona maro lasa izay dia nanomboka nanatona ny fitsaboana ilay aretina avy amin'ny ala vaovao i Schubert sy ireo mpiara-miasa aminy. Raha tokony ho ny amyloid, dia nanapa-kevitra ny tsy hiditra amin'ny labozia ny tahan'ny aretina. Nampiasa ny vovony J 147 (1146963-51-0) izy ireo tamin'ny fampisehoana ireo tarehimarika hita amin'ny sela.
Talohan'izay dia hitan'ny ekipa fa ny vovoka J-147 dia afaka misoroka ary mamadika ny fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena ary ny patolojia Alzheimer amin'ny totozy izay manana kinova amin'ny endrika nolovaina Alzheimer, maodely voalavo be mpampiasa indrindra. Saingy, io karazana aretina io dia tsy misy afa-tsy ny 1 isanjaton'ny tranga Alzheimer. Ho an'ny olon-drehetra, ny fahanterana no mampidi-doza voalohany, hoy i Schubert. Ny ekipa dia te-hijery ny vokatry ny kandidan'ny zava-mahadomelina amin'ny karazana totozy izay antitra haingana ary hiaina kinova dementia izay mitovy bebe kokoa amin'ny aretin'olombelona mifandraika amin'ny taona.
J 147 Rovaha maina
Raw J 147 vovoka Marketing
Ahoana ny hividianana vovony J 147 avy any AASraw